Inkonzo ye-China Express Service kunye nearhente | Ilanga
Ukuhambisa ngenqanawa ngeakhawunti yakho ebonakalayo kuyabiza kakhulu? Ke kutheni ungathumeli ngevolumu yethu? Sinikezela abathengi ngenkonzo efana ne-DHL, i-UPS kunye ne-EMS ngamaxabiso ezaphulelo. Ukuhanjiswa okukhawulezayo kumanqanaba ezoqoqosho, kufanelekile ukuba uyisebenzise.
I-DHL yinkxaso-mali yeDeutsche Post DHL, iqela elidumileyo leposi kunye nelezothutho. Oku kubandakanya ikakhulu iiyunithi zeshishini ezilandelayo: I-DHL Express, ukuThunyelwa kweLizwe kwe-DHL, ukuhanjiswa kwempahla kunye ne-DHL yokuThengiswa. Ngo-1969, i-DHL yavula indlela yokuqala yokuhambisa iimpahla ukusuka eSan Francisco ukuya e-Honolulu. Ukusukela ngoko, iqhubekile ikhula ngesantya esimangalisayo kwaye iye yaba yinkokheli yentengiso kwishishini lokuhanjiswa kwehlabathi. Ingathunyelwa kumazwe angama-220 kunye nemimandla kwihlabathi liphela, egubungela ngaphezulu kweendawo ezili-120,000 (iindawo eziphambili zekhowudi yengingqi), kunye nokubonelela ngekhuriya kunye neenkonzo zekhuriya kubathengi abadibeneyo nabangasese. Nokuba luxwebhu okanye yiphakheji, nokuba iziswa kwangolo suku lunye, ngaphakathi komda okanye ngaphakathi komhla omiselweyo, iDHL International Express inokubonelela ngeenkonzo ezihlangabezana neemfuno zakho. Ixabiso lisengqiqweni kwaye ukuhanjiswa kuyakhawuleza. Yinkonzo oyithandayo oyithandayo.
I-UPS International Express yasekwa e-United States kwaye yeyona nkampani inkulu yokuhambisa iipasile. Ukuzibophelela ekuxhaseni uphuhliso loshishino lwehlabathi. Ikwangumboneleli okhokelayo wezothutho lobuchwephesha, ulungiselelo, kunye neenkonzo ze-e-commerce, ekhonza ngaphezulu kwamazwe angama-220 kunye noMmandla, ukubonelela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu kunye nokukhawuleza.
Inkonzo ye-Fedex yahlulwe yohlobo oluphambili (IP) kunye nohlobo loqoqosho (IE), iphambili (IP) inkonzo yokubonisa: ixesha lesalathiso iintsuku ezi-2-5 zokusebenza, uqoqosho (IE) ukuveza inkonzo: ixesha lesalathiso iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7 zokusebenza, Lusuku yeyona nkampani inkulu yokuhambisa i-Express, ekhonza ngaphezulu kwamazwe angama-220 kunye nemimandla kwihlabathi liphela. Yinkonzo ebanzi ebanzi, ekhuselekileyo nenokuthenjwa, ekhawulezayo, yokungena kwindlu ngendlu. Ilungele ukuhambisa ixabiso eliphezulu, ukuthunyelwa kwexesha elinobuzaza, kwaye inikezela ngeenkonzo zokukhawulezisa nezithembekileyo.
I-EMS International Express (IiNkonzo zePosi yeHlabathi yeHlabathi ye-imeyile) yinkonzo yokuthumela iposi yamanye amazwe elawulwa yi-UPU. I-EMS yamazwe aphesheya kwezorhwebo iyakonwabela amalungelo okuqhubekeka phambili kwiiposi ezahlukeneyo, amasiko, ukundiza kunye namanye amasebe. Isantya esiphezulu kunye nomgangatho ophezulu wokuhanjiswa kweeleta ezingxamisekileyo zamanye amazwe, amaxwebhu, amatyala emali, iisampulu zorhwebo kunye namanye amaxwebhu kunye nezixhobo kubasebenzisi. Ukucaciswa kwamazwe aphesheya kwe-EMS akufuneki iintlawulo ezongezelelweyo zepetroli kwaye kunokufikelela kwiindawo ezingama-210 kwihlabathi liphela. Amandla okucacisa amasiko asemthethweni aqinile, kwaye ukucocwa kwamasiko kuyadityaniswa ngeposi.
UkuBonisa iiNkonzo zokuHanjiswa kweHlabathi